Flash News Archives - Page3of5- Khabar Time
पोखरा महानगरपालिका–३१ लेखनाथमा रहेको वेगनास तालमा डुङ्गाबाट दाउरा र घाँस ल्याउँदै स्थानीय कृषक रवीन्द्र कँडेल । उहाँले गाईवस्तुका लागि खुवाउन र कुँडो पकाउनका लागि ताल पारी गएर दाउरा र घाँस ल्याएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यतिबेला तालका डुङ्गा चलेका छैनन् । स्थानीयले गाईवस्तुकालागि यसरी आफ्नै डुङ्गाबाट घा...
सङ्क्रमणबाट बच्न हालका दिनमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसनियः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, २६ चैत- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न हालका दिनमा नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा सञ्चालित ५८औँ समूहको अधिकृत क्याडेट तालीम पूरा गर्ने नवआयुक्त अधिकृतलाई पठाउनुभएको सन्देशमा उहाँले भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न किस...
धनगढीका घरघरमा ड्रोन मार्फत औषधी
गोदावरी । कैलालीको धनगढीमा ‘दैलोमै दबाई’ अभियान थालेको बोलन्या थलीले ड्रोनमार्फत घर–घरमा औषधि पुगाउन थालेको छ । क्यान फारवेष्टसँगको समन्वयमा ड्रोन मार्फत नै बिरामीको घरमै औषध पुगाउन थालिएको बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले बताउनुभयो । लकडाउनको यो बेला अत्यावश्यक औषधिको समस्या झेल्दै आएका बिरामीलाई घरमै पुगेर निःशुल्...
काठमाडौं–लकडाउनले भारतमा अलपत्र परेका दुई नेपालीको उत्तराखण्ड प्रहरीले उद्धार गरेको छ । गुफामा बसेका नेपाली युवकलाई उत्तराखण्डको नीलकण्ठ चौकीका इन्चार्ज एसआई रणवीर रमोलाको टोलीले उद्धार गरेको हो ।लकडाउनको समयमा अलपत्र परेका तथा भोकै रहेका मानिसलाई सहयोग गर्ने क्रममा दुई नेपाली युवा गुफामा बसेको थाहा पाएपछि एसआई रमोला न...
काठमाडौं । विश्व बैङ्कले कोरोना संकटसँग जुध्न नेपाल सरकारलाई २९ मिलियन डलर (करिब ३ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गरेको छ । कोभिड-१९ आपतकालीन, महामारी पूर्वतयारी तथा योजनाअन्तर्गत विश्व बैङ्कले उक्त रकम बराबरको ऋण सरकारलाई दिएको हो । यो ऋण द्रूत प्रक्रियाबाट सरकारले प्राप्त गर्नेछ । ऋण सहायता प्...
काठमाडौं । सरकारले नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध वैशाख १८ सम्म लम्ब्याएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिबन्ध लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । अन्तरिक उडानबारे भने छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले जानकारी दिए । यसअघि ३ वैशाखसम्म आन्त...
हामी त घरमा बस्छौं, तिमी के गर्छौ सरकार ?
काठमाडौं । फ्रान्सबाट फर्किएकी १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण भेटिएपछि सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गर्‍यो । जसलाई आम नागरिकले सहर्ष स्वीकार गरे । सरकारले सुरुमा सात दिनलाई भन्यो, नागरिकले आफूलाई घर/फ्लाट/कोठाको चौघेरामा सीमित गरे । १८ गते बिहान ६ बजेको भाका नसकिँदै सरकारले फेरि भन्यो, अब २५...
विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीबारे सरकार के सोच्दैछ ?
काठमाडौं । नेपालमा रहेका २६४ अष्ट्रेलियन नागरिकलाई लिएर चैत १९ गते नेपाल एयरलाइन्स अष्ट्रेलियाको ब्रिसबेन पुग्यो । त्यतिबेला अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत केही नेपाली विद्यार्थीका अभिभावकले नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालयमा फोन गरेर सोधेका थिए, ‘रित्तै फर्किने विमानमा हाम्रा छोराछोरी फिर्ता ल्याउन मिल्दैन ? हामी उनीहरुलाई क्वारेन्...